साधना प्रतीक्षा - कान्तिपुर समाचार
साधना प्रतीक्षाका लेखहरु :
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि व्यावहारिक बन्न नसकेको हाम्रो शिक्षा पद्धतिका कारण बालबालिका एकातिर किताब–कापीको गह्रौं भारीले थिचिएका छन् भने, अर्कातिर गृहकार्यको बोझले किचिएका छन् । विशेष गरी निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका पढाइको अत्यधिक चापमा छन् ।
देश र जनताको उन्नति, प्रगति एवम् सुनिश्चित भविष्यका लागि आवश्यक नीति अवलम्बन गरी तदनुरूप कार्य गर्ने पद्धति राजनीति हो । तर हामीकहाँ राजनीतिले यसो गर्न सकेको देखिँदैन । यहाँको राजनीति नीतिमुखी नभएर नेतृत्वमुखी बन्दै गइरहेको देखिन्छ । हरेक राजनीतिक दलको अभीष्ट जसरी हुन्छ सत्तामा जानु तथा तिनका नेता–कार्यकर्ताको अभीष्ट नेतृत्व प्राप्त गर्नु नै रहेको देखिएको छ । विगतमा भएको नेकपा एमालेभित्रको विवाद तथा त्यसबाट सृजित दल विभाजन र अहिलेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका परिदृश्यले यही तथ्यलाई उजागर गरिरहेका छन् ।
सहरका रूखका दुःख
महानगरको फुटपाथमा हिँड्दै गर्दा सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ, फुटपाथ कसका लागि ? रूखका लागि या पैदल यात्रुका लागि ? त्यसै त दोहोरो आवागमनमा कठिनाइ हुने साँघुरो फुटपाथ, त्यसमा पनि कपूर, धुपीजस्ता ठूला जातका रूख हुर्कंदै गरेका । पछि तिनका फेदले नै पूरै फुटपाथ ढाकिनेछ ।
अनलाइन कक्षा र आन्तरिक मूल्याङ्कन
केही समयअघि भेट भएका एक परिचितलाई उनका छोराको पढाइबारे प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘जाँचै नदिई एसईई पास गरेको, त्यो पनि ए प्लस ल्याएर, चानचुने कलेजमा पढ्दिनँ भन्यो । ए प्लस ल्याएकोलाई साइन्स नपढाई पनि त भएन । अहिले भने घाँडो पो भएको छ । जाँचै नदिई पास भएजस्तो सजिलो पढ्न त कहाँ हुन्थ्यो र ? बहिनीचाहिँ पनि जाँच दिन पर्दैन क्यारे भनेर अहिलेदेखि नै फुरुङ्ग छ । पढाइ भने जिरो... !’
कोरोना–पाठ सिक्न नसक्नेहरू
उनका श्रीमान् सरकारी सेवाको उच्च तहमा पुगेर निवृत्त भएका, उनी स्वयम् सामाजिक जीवनमा परिचित, तीनवटै सन्तान विदेश गएर उतै आ–आफ्नो राम्रो व्यवस्था गरेर बसेका । धनसम्पत्ति, इज्जत–प्रतिष्ठा केहीको कमी थिएन ।
मलम लगाऊ आर्तहरूको चहर्‍याइरहेको घाउ
मुलुकको राजनीति अहिले अस्थिर मात्र नभएर दिशाविहीन र सिद्धान्तविहीन पनि बनिरहेको छ । त्यसैले त पूर्णतः भौतिकवादमा विश्वास गर्ने; मार्क्स, लेनिन, माओ आदिका अनुयायी नेपाली वाम नेताहरू धर्मका नाममा राजनीति गर्न लागिपरेका छन् ।
निरन्तर बढ्दो जाडोले वातावरण जति कठ्यांग्रिँदै छ, राजनीतिक परिस्थितिबारे बहस पनि त्यति नै तात्दै छ । चोक, बजार, चौतारो या चियापसल सबैतिर सुनिने बहसको पक्ष–विपक्ष भने एकै प्रकारको छ– ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक निर्णय गर्न हुँदैनथ्यो,’ ‘किन हुँदैनथ्यो ?’
आह्वान सन्त्रस्त आमाहरूको !
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानले हाम्रो परिवेश तातिरहँदा, छ वर्षिया बालिकाको बलात्कारपश्चात् हत्याको घटना पनि सेलाउन सकेको छैन ।